वारपारको मुडमा ओली, के गर्लान् माधव र प्रचण्ड ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ आश्विन ८, बिहीबार १७:२५:००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य खेमालाई बाइपास गरी एकलौटी रुपमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेपछि पार्टीमा फेरि आगो बल्ने भएको छ ।
असन्तुष्ट खेमाका नेता माधव नेपालले आफूसँग सल्लाह पनि नगरेको र स्थायी तथा सचिवालय बैठकको निर्णय विपरीत ओलीले एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो प्रधानमन्त्रीकै अधिकार क्षेत्र भए पनि पार्टी निर्णय र सहमतिको मर्मविपरीत भनेका छन् ।
ओली पक्षका नेताहरुले कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गरेको व्रिदोहमार्फत् विष्फोट भएको नेकपाभित्रको नयाँ चरणको असन्तुष्टिको आगोमा घिउ थप्ने गरी ओलीले मन्त्री हेरफेर गरेका छन् ।
तर, ओली पक्षले भने विरोध र असन्तुष्टि औचित्यहीन भनेको छ । हेरफेर गर्नुपर्ने आ–आफ्ना खेमाका व्यक्तिहरुको नाम देऊ भन्दा नमानेपछि यो निर्णय लिनुपरेको यस खेमाको भनाइ छ ।
हुन पनि ओलीले यसपालि आफ्नो खेमाका नेताहरुको जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरे । माधव नेपाल र प्रचण्डका कोटा चलाएनन् ।
सञ्चार मन्त्रालय गोकुल बाँस्कोटाकै पालादेखि ओलीको कोटा थियो । अर्थमा उनकै विश्वासपात्र युवराज खतिवडा थिए । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिए, उनकै पक्षका हुन् ।
सहरी विकास भने यसअघि तत्कालीन समाजवादीको कोटामा थियो । उक्त दलले सरकार छाडेपछि ओलीकै विश्वासपात्रहरुले चलाइरहेका थिए ।
नेपाल र प्रचण्डका मन्त्रीहरु न हटाइए, न सारिए, न त थपिए नै । यस हिसाबले हेर्दा ओलीको यो निर्णयबाट अन्य खेमाले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।
तर, गएको भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी समिति बैठक र असोज ४ को सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो भन्ने दाहाल–नेपाल पक्षको भनाइ छ ।
त्यस्तै विष्णु पौडेल नेतृत्वको तीन सदस्यीय विवाद समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा पनि यिनै थिए । त्यसमा ओलीले पनि सहमति जनाएकै हुन् ।
बैठक सकिएपछि ओलीले यी कुनै पनि निर्णय र सहमति आत्मसात् नगरेको, एकमना ढंगले चल्न खोजेको विरोधी खेमाको आरोप छ ।
बैठक सकिएयताका हरेक दिन प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर यिनै विषय कार्यान्वयनमा जोड गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तन र मन्त्री हेरफेरको विषयमा ओलीले कहिल्यै चासो दिएनन् ।
केवल खाली भएका मन्त्रालयमा पदपूर्ति मात्र गर्न सकिने उनको अडान थियो । अन्ततः गरे पनि त्यही । मन्त्री बन्न ठिक्क परेकाहरु हिस्स परे ।
मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर प्रचण्ड र नेपालले आश्वासन बाँडेका थिए भने उनीहरु पनि ङिच्च भए । अझ प्रचण्ड त आफ्नी बुहारीबाहेक सबै मन्त्री फालेर नयाँ ल्याउनुपर्ने पक्षमा थिए । उनको यही कमजोर कडी थाहा पाएर पनि ओलीले पेल्दै लगेको देखिन्छ ।
हुन त मन्त्रिपरिषद हेरफेर प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्रको कुरा नै हो । आफूलाई सहज हुने टिम बनाउन प्रधानमन्त्रीले पाउनु पनि पर्छ ।
तर ओलीले आफूलाई सहज हुने, कार्यसम्पादन बढाउने र देश तथा जनतालाई राहत दिनेभन्दा पनि दाउपेचको नीतिअन्तर्गत यो सब गरिरहेको देखिन्छ । कसैलाई भित्तामा पु¥याउने र आफ्नो दम्भ प्रदर्शन गर्ने एक अभीष्ट यी कदमहरुले व्यक्त गर्दछन् ।
प्रदेशमा विरोधी खेमाका एक मात्र मुख्यमन्त्री आफ्नै नेता लगाएर फाल्न लगाउने, केन्द्रमा व्यक्तिगत तजबिज प्रयोग गरी पजनी शैलीमा जिम्मेवारी तोक्ने उनको बेहोरा कसैले मन पराएका छैनन् । यसले अब नेकपामा फेरि आगो बाल्न मद्दत गर्ने भएको छ ।
बल्लतल्ल सुल्झिएको भनिएको नेकपाको विवाद फेरि पुरानै ठाउँमा पुगेको छ । अब ओली, नेपाल र दाहाल तीनै नेता भेट नहुने बाटोतिर उन्मुख हुनका लागि प्रशस्तै आधार बनेका छन् । ओलीले पनि वारपारकै लडाइँ गर्न खोजेको बुझिन्छ ।
त्यसो त ओलीले यसअघि नै प्रचण्डको अब नेकपामा काम छैन, छाडेर गए हुन्छ भन्ने सन्देश पटकपटक दिइसकेका हुन् । प्रचण्ड पक्षका धेरै नेता आफूसँग तानिसकेकाले छाडेर जाँदा पनि उनी एक्लै हुने ओलीले देखेका छन् ।
माधव नेपाललाई सानोतिनो लोभमा अल्मल्याइहालिन्छ भन्ने ओलीको बुझाइ छ । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायत नेताहरुलाई आफूसँग राखेपछि नेपाल एक्लै कहीँ जान सक्दैनन् भन्ने आकलन पनि ओलीले गरेका छन् ।
कदाचित प्रचण्ड र नेपाल मिलेर पार्टी फुटाए पनि पूर्वएमाले कार्यकर्ता मूलधार छाडेर जान नसक्ने ठानेका छन् ओलीले । त्यसैले दिनदिनैको किचकिच बेहोर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धी नेताहरुले छाडेर गए हुन्थ्यो भन्ने ओलीको बुझाइ देखिन्छ ।
भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएर संविधान जारी गरी गएको निर्वाचनको अपार जनमत आफू एक्लैको कारणले सम्भव भएको ओलीको निष्कर्ष छ ।
तर ओलीले के बुझेको देखिँदैन ओली एक्लैको कारण हुन्थ्यो भने २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी आफै किन हारे ? पार्टीभित्रै पटकपटक अध्यक्षमा किन हारे ? किनकि, चुनाव एक्लैले जितिँदैन । जनमत एक्लैले हासिल गरिँदैन । नेकपा एमालेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको रगत पसिनाबाट यो पार्टी र जनमत तयार भएको हो ।
अहिले उनले जसरी शीतलनिवासदेखि सिंहदरबारसम्म आफ्ना निकस्थहरुलाई भरिभराउ बनाएका छन्, यो अवस्था आउनुमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी आन्दोलनको पनि हात छ ।
माधव नेपाल र वामदेव गौतमले ज्यान जोखिममा राखेर द्वन्द्वकालमै माओवादीसित शान्तिवार्ताको पहल नगरेका भए पनि यो अवस्था नआउन सक्थ्यो ।
(के गर्लान् माधव र प्रचण्ड ? अर्को शृंखलामा)